Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) - Hello Sayarwon
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ)
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) ကဘာလဲ။
Bronchiectasis ဆိုတာ အဆုတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လေပြွန်တွေ ပျက်စီးသွားပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲ ကျယ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ထဲက ပျက်စီးသွားတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေက ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ အချွဲတွေကို အဆုတ်ထဲမှာ ပေါ်ပေါက်လာစေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဘတ်တီးရီးယား၊ အချွဲတွေက အဆုတ်ရဲ့ ကာကွယ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ဖျက်စီးလိုက်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမှာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
လေပြွန်နံရံတွေက ကာလကြာမြင့်စွာ ယောင်ယမ်းခြင်း နှင့် ပိုးဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ထူလာပြီး အချွဲ တွေ စုပုံ လာစေပါတယ်။
Bronchiectasis က အမြစ်ပြတ် ကုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်တင့်တဲ့ ကုသမှုနဲ့ အသက်ရှင်သန် နိုင်ပါတယ်။ သင့် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အောက်ဆီဂျင်မပြတ်သွားဖို့ အတွက်သေချာကုဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်မှာ ဒီရောဂါ ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြား အဆုတ်ရောဂါတွေ ရှိတဲ့ လူတွေမှာလဲ ဒီရောဂါ ရှိနိုင်လို့ပါ။ ဒီရောဂါက အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပြီး ကလေးတွေတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ သင့် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တွေ့ရများတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့
ချောင်းဆိုးပြီး အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင် အကျိအချွဲများ ထွက်ခြင်း၊
လှုပ်ရှားမှုများတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ရှူမဝဖြစ်ခြင်း၊
လှုပ်ရှားမှုများတဲ့ အချိန်မှာ မောပန်းခြင်း၊
အသက်ရှူတဲ့ အခါမှာ တရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊
ချောင်းဆိုးတဲ့ အခါ အချွဲများနှင့် အတူ သွေးများပါလာခြင်း၊
လက်သည်း၊ခြေသည်းများ အောက်မှ အရေပြားများ ထူလာခြင်း၊
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများမှာ မပါတဲ့ လက္ခဏာများလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါ လက္ခဏာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းတာ ရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများ ရှိရင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းများမေးချင်ရင် သင့် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ လူတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ တုန့်ပြန်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အခြေအနေ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Bronchiectasis ကို ဘာတွေက ဖြစ်စေသလဲ
အဆုတ်တွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် အဖြစ် အများဆုံးပါ။ တုပ်ကွေးကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးများ၊ စတပ် သို့မဟုတ် တီဘီပိုးကဲ့သို့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးများ ဝင်ခြင်း တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ပြင်ပမှ အရာများ ရှူသွင်းမိခြင်း၊ အစာများ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းသို့ ဝင်သွားခြင်း၊
ခုခံအားကျဆင်းခြင်း ( သွေးတွင်းတွင် ရောဂါပိုးများကို တိုက်ခိုက်သော ပရိုတိန်း နဲပါးခြင်း)
အဆစ်အမြစ်ယောင် ရောဂါများ (လေးဖက်နာ ရောဂါနှင့် ကိုယ်ခန္ဓါခြောက်သွေ့ခြင်းများ )
Alpha 1-antitrypsin ချို့တဲ့ခြင်း
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းသည့် ရောဂါများ
ခုခံအား ကျဆင်းမှု ရောဂါများ၊ ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့ အတွက် ကူးစက်ရောဂါများ ပိုမို ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဒီရောဂါကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
အစာအိမ်မှ အစာရေမြိုသို့ အစာအိမ်မှ အချဉ်ရည်များ ပြန်တက်ခြင်း
ဓါတ်မတည့်သော မှိုရောဂါများ (ဓါတ်မတည့်၍ အဆုတ်ယောင်ခြင်း)
ငါ့ဆီမှာ Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဒီရောဂါကို ပိုဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေ များစွာ ရှိပါတယ်။
လေပြွန်တွင် CFTR ဟုခေါ်သော ပရိုတိန်း မပါဝင်ခြင်း၊ ချို့တဲ့ခြင်း
ကိုယ်ခန္ဓါကိုယ် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဤရောဂါနှင့် ဆက်စပ်သော ရောဂါများ ဖြစ်လာခြင်း
နာတာရှည် ပြင်းထန်သော၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပျက်စီးစေသော အဆုတ်ရောဂါများ (တီဘီရောဂါ) ဖြစ်လာခြင်း
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ပုံမှန် မဟုတ်သော အသံများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့နေမှုကို သက်သေပြနိုင်ရန် အသက်ရှူသံနားထောင်ပါ။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို သိနိုင်ရန် သွေးစစ်ပါ။
ဘတ်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးများကို ရှာဖွေရန် သလိပ်စစ်ပါ။
အဆုတ်ရဲ့ ပုံရိပ်များကို သိနိုင်ရန် ဓါတ်မှန်ရိုက်ပါ။
အဆုတ်ထဲသို့လေကောင်းစွာ ရောက်မရောက် သိနိုင်ဖို့အတွက် အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို စစ်ဆေးသော စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။
တီဘီရောဂါအတွက် PPD ဟုခေါ်သော အရေပြားစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ABPA ရှိ၊ မရှိကို သိနိုင်ရန် မှိုနှင့် ပဋိဇီ၀ ဖြစ်သည့် IgE ကို စစ်ဆေးပါ။
ကိုယ်ပိုင် တစ်ရှူးကို ပြန်တိုက်သည့် ရောဂါများကို စစ်ဆေးသည့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
Bronchiectasis (Bronchiectasis ဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒီရောဂါအတွက် တိကျသေချာတဲ့ ကုသမှု မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်ဆန်တဲ့ ကုသမှု ရရှိခဲ့ရင် ရောဂါ အခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာပါ။ ကုသမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရောဂါပိုး ဝင်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့၊ အကျိအချွဲတွေ ထွက်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကျဉ်းသွားမှုကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့အဆုတ် ပျက်စီးမှု ကို လျှော့ချဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီရောဂါမှာ ဘတ်တီးရီးယားတွေက လေပြွန်တွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အတွက် ပဋိဇီဝဆေး တွေနဲ့အများဆုံး ကုပါတယ်။
Macrolides ဆိုတာ ဘတ်တီးရီးယားတွေကို သတ်တဲ့ အပြင် လေပြွန်ယောင်ခြင်းတွေကို လျော့စေတဲ့ ပဋိဇီဝဆေး တစ်မျိုးပါ။
ချွဲ၊ သလိပ်တွေကို နည်းစေတဲ့ ဆေးများကို ဆေးရှူတဲ့ ကိရိယာလေးက တစ်ဆင့် ရှူရပါတယ်၊ အဲ့ ဆေးကို ဆလိုင်းနဲ့ဖျော်ပြီး ကိရိယာလေးထဲမှာ အမှုန်အမွှား အသွင်ပြောင်းပြီး အဆုတ်ထဲကို ရှူသွင်းရပါတယ်၊ ဒီလို ရှူခြင်းက လေပြွန်ထဲက အချွဲတွေကို ပျော်ဝင်သွားစေပြီး ချောင်းဟန့်အလွယ်တကူ ထုတ်ပစ်လို့ရစေပါတယ်။
အချွဲတွေကို ပါးသွားစေသော စက်တွေက ချွဲတွေကို ရှင်းထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီစက်က လူနာကို အသက်ရှူ ရတာ လွယ်စေပါတယ်။ စက်က လေပြွန် ထဲမှာ လေဝင်ရတာ လွယ်စေပြီး အချွဲတွေကို ဖျက်ဆီး ပစ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်ကို တုန်ခါစေပြီး အချွဲတွေကို လျော့နည် စေတဲ့ ဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ အခြား ပစ္စည်း တွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို ပစ္စည်းက မိမိနဲ့အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆိုးဝါးသော အခြေအနေ တွေမှာ ဆေးရုံတင်ပြီး ကုသခြင်း
Corticosteroid ဖြင့် ကုသခြင်း
မှန်ကန်သော အစားအသောက်များ ရွေးချယ် စားသောက်ခြင်း
ဘယ်လို ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ဘယ်လို အိမ်တွင်း ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသခြင်း က ရောဂါကို လျော့စေမလဲ
စောစော ကုသဖို့သတိရပါ။ အဆုတ်ထဲကို ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အပြင်သွားရင် ညစ်ညမ်းသော လေတွေ၊ ဓါတု ဓါတ်ငွေ့တွေကို မရှူမိစေရန် ကာကွယ်ပါ။
သင့် ကလေးတွေကို တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ကြက်ညှာ ချောင်းဆိုး၊ ဝက်သက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများကို တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန် ထိုးပေးပါ။
မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းရှိရင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းမှု ကို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Bronchiectasis http://www.healthline.com/health/bronchiectasis#Causes2. Accessed March 4, 2017
Bronchiectasis http://emedicine.medscape.com/article/296961-overview#a6. Accessed March 4, 2017
Progressive supranuclear palsy (supranuclear အမျိုးအစား ပို၍ ဆိုးလာတတ်သော အကြောသေရောဂါ)